Momba ny fitaomana sy ny mandeha ho azy | Martech Zone
Alahady, Jolay 9, 2006 Asabotsy, Aprily 16, 2016 Douglas Karr
Nahaliana ny toko iray ao amin'ny Resadresaka mitanjaka, Nanapa-kevitra ny hamerina ny bilaogiko aho anio. Nantsoiko fotsiny hoe Douglas A. Karr, marketing nomerika sy tahiry. Tena tsy nilaza betsaka momba ny momba ahy sy ny zavatra ezahako tanterahina tamin'ny alàlan'ny bilaogiko izany. Nisy olona nanoratra tao Feedster 'Automation marketing', azoko antoka fa tsy ho teo amin'ny lisitra aho - na dia tiako be aza izany.
Nanandrana nampiasa fehezan-teny iray fotsiny aho fa tsy nahita. Taorian'ny ady maharitra an'ny thesaurus ary malagasy nanamarina, nanapa-kevitra aho fa misy fehezan-teny 2 izay namintina azy… ny fitaomana sy ny mandeha ho azy. Ny finoako dia ny marketing mahomby dia tena tonga amin'ireo fe-potoana 2 ireo. Ny fahaizana mivarotra amin'ny fomba mahomby dia tokony hitaona olona hividy ny vokatra na serivisy amidinao. Ny automatisation no fitaovana hanohizana ny fizotrany mandritry ny dingana mandra-pahavitany.
Niara-niasa tamin'ny gazety, mailaka mivantana, magazine, telemarketing, tranonkala, bilaogy ary hetsika mailaka amin'ny mailaka, dia ny fihazonana ny resaka miaraka amin'ilay olona hatrany. Mandrosoa doka eo alohan'izy ireo ary hadinoy ny momba azy ireo, ary ahenainao kely ny fahafahanao manidy ny varotra. Mila mikiry ianao fa manaja izay ilain'ny olona na iriny.
Roapolo taona lasa izay, nandritra ny fotoana fohy talohan'ny nidirako tao amin'ny Navy, niasa tao amin'ny Home Depot aho. Asa mafy izany. Izaho dia 'zazalahy be', nameno ny fiaran'ny mpanjifa sy ny kamio tany Phoenix, Arizona. Fa tsy hohadinoiko mihitsy ny lesona voalohany nataoko momba ny Marketing tany. Nanentana ny mpiasa rehetra ny mpitantana hanontany ny mpanjifa hoe inona ny tetikasa iasan'izy ireo. Hafa noho ny manontany hoe "Afaka manampy anao ve aho?". Ho an'izay, ny valiny tsotra dia mety "Tsia". Na izany aza, rehefa nanontaniana izy ireo hoe inona ny tetik'asa iasan'izy ireo, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia nanomboka fifanakalozan-kevitra tsara tamin'ny mpiasa momba izay ezahin'izy ireo hotanterahina. Izany dia nanjary mpanjifa sambatra kokoa ary varotra mihidy.
Amin'ny alàlan'ny mpanelanelana amin'ny Internet toy ny tranonkala dia resaka mbola ezahintsika hatomboka amin'ny mpanjifantsika ihany izy io. Ny fametrahana tranokala misy sary mahafinaritra dia toy ny hoe manana fambara miavaka ivelan'ny fivarotana anao. Saingy tsy hisolo toerana veloma ny tàn-tànana mahafinaritra sy ny hello mihitsy izany.
Mbola mitoetra hatrany ireo maodelin'ny dokam-barotra mampiditra. Meteza manao dokam-barotra hatraiza hatraiza ary mety misy mahita iray ary mividy zavatra. Na eo aza izany, ny Internet dia mitondra mpanelanelana tsara hiresahana amin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao. Ny blaogy, RSS, mailaka, endrika, forum Internet, ary ny fikarohana dia ezaky ny varotra ifanakalozana rehetra. Arakaraka ny ahafahanao mampifamatotra sy mampandeha azy ireo amin'ny ezaka ataonao amin'ny varotra no mahatsara ny fifampiresahana eo aminao sy ny vinavinanao ary ny fahombiazan'ny orinasanao.
Momba ny fitaomana sy ny mandeha ho azy daholo izany. Manantena aho fa tianao ny lohateny vaovao!
Tags: automatiquedouglas karrhery miasa manginaamin'ny fitaomana sy ny ototrarobert scobleShel Israel